Horyaalkii Serie A Ee Taliyaaniga Oo Saamayn Xun Uu Ku Yeeshay Xanuunka Corona Virus? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Horyaalkii Serie A Ee Taliyaaniga Oo Saamayn Xun Uu Ku Yeeshay Xanuunka Corona Virus?
Kadib cudurka Corona Virus oo saamayntii ugu xumayd ku yeeshay kubbada cagta Talyaaniga ayaa keenay in laga fikiro qaabkii lagu go’aamin lahaa kooxda ku guulaysan doonta koobka Serie A iyo waliba kaalmaha horyaalka looga hadho ee Serie B loogu laabto.
Xidhiidhka kubbada cagta Talyaaniga FIGC iyo dhinacyada ay khusayso ee ku lugta leh kubbada cagta Italy ayaa shir ka yeeshay waxa laga yeelayo xaalada cakiran ee ay gashay kubbada cagta Talyaanigu oo hore go’aan looga soo saaray.
Waxaa hore loo shaaciyay in dhamaan dhacdooyinka Sportska dalka Talyaanigu ay xidhan yihiin ilaa April 3 markaas oo aan xataa la ogayn sida ay xaaladu noqon doonto waxayna taasi keentay in waqtigii uu xidhmi lahaa xili ciyaareedku laga gaadhsiin doonin kulamada baaqanaya.
Waxa uu FIGC miiska soo saaray doorashooyin kala duwan oo lagu go’aaminayo koobka horyaalka Talyaaniga ee Serie A oo uu wali tartankisu si adag u furan yahay.
Madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Italy ee Gabriele Gravina ayaa soo jeediyay qorshayaal kala duwan waxaana ka mid ahaa in koobka iyo kaalmaha muhiimka ah ee Serie A lagu go’aamiyo isla miiska kala saraynta Serie A ee maalintii uu cudurka Corona Virus saamaynta ku yeeshay kubbada cagta Italy.
Waxa kale oo uu Gabriele Gravina soo jeediyay in dib loo dhigo waqtigii la filayay in uu dhamaado koobka Serie A oo la gaadhsiiyo waqti yar ka hor furitaanka Euro 2020 kaas oo isaga laftiisu hadda halis ugu jira in dib loo dhigo.
Laakiin soo jeedimaha Gabriele Gravina ayaa u muuqda kuwo aan wada qancin karin kooxaha iyo daneeyaasha Serie A, waxaana jira qorsho kale oo lagu doonayo in kulamo Play-off ah lagu go’aamiyo koobka iyo kaalmaha muhiimka ah.
Xidhiidhka kubbada cagta Talyaaniga ayaa doonaya in haddii ay xaaladu ka soo rayn waydo in koobka horyaalka Serie A lagu go’aamiyo kulamo Play-off ah oo ay ciyaari doonaan kooxaha ugu sareeya ee koobka ku tartamayaa.
Haddii ay dhacdo waxay noqon doontaa markii ugu horaysay taariikhda Italy ee xanuun sabab u noqdo in kulamo play-off ah lagu go’aamiyo koobka Serie A ee Scudetto.
56 sanadood ka hor ayay ahayd markii ugu horaysay ee koobka Serie A ee Scudetto lagu go’aamiyay hal kulan oo Play-off ah balse markaas xaalada ayaa sidan ka duwanayd waxayna ahayd xili ciyaareedkii 1963/64 kii markaas oo ay kooxaha Inter Milan iyo Bologna ay xili ciyaareedka ku wada dhamaysteen min 54 dhibcood.
Waxaana markaas qasab noqotay in hal kulan oo play-off ah loo qabtay kooxaha Inter Milan iyo Bologna iyada oo waliba garoon dhex dhexaad ah lagu ciyaaray waxaana guul 2-0 ahayd koobka loogu gacan galiyay kooxda Bologna oo ay goolashaas ka caawiyeen Giacinto Facchetti oo gool iska dhaliyay iyo Harald Ingemann Nielsen oo goolka kale dhaliyay.
Laakiin xaalada hadda taagan iyo tan hore ayaa gabi ahaanba kala duwan, waxaana jira kooxo ugu yaraan saddex ah oo ku lug yeelan kara kulamada Play-offka lagu go’aamin karo koobka Serie A haddii ay suurtogal noqon waydo in kulamada xili ciyaareedka ka hadhsan oo dhan la ciyaaro.
Sida ay hadda u taagan tahay Juventus ayaa hogaanka Serie A ku haysa 63 dhibcood waxaana kaalinta labaad ku jirta Lazio oo 62 dhibcood leh halka Inter Milan oo hal kulan baaqi u yahay ay kaalinta saddexaad ugu jirto 54 dhibcood.
Waxaana suurtogal ah in kooxaha Juventus, Inter Milan iyo Lazio loo qaban karo kulamo Play-off ah oo lagu go’aamin doono kooxda koobka Serie A ku guulaysan karta.
Waxa kale oo kulamo Play-off ah loo qaban doonaa kooxaha ka baxsanaya kaalmaha horyaalka Serie A looga hadho taas oo iyaduna saamaynteeda yeelan karta.